Nepal Auto अब लकडाउन होइन लुजडाउन - Nepal Auto
काठमाडौं -सरकारले जारी निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुजडाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञाको ‘मोडालिटी’ सर्वसाधारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । खोटाङ र मनाङमा भने निषेधाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषेधाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परिमार्जन गरिने जानकारी दिएका छन् ।
अब ड्राइभिङ लाइसेन्स पास गरे पश्चात एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइने
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेका...
जब दश गुणा बढी भाडा लिएकाे थाहा पाएपछि प्रहरी आफैँ यात्रु बनेर बसपार्क पुग्याे…
काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्ला जाने क्रममा यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट...
बि. सं. २०३५ तिरको कुरा होला पोखरामा दुई तले बस आएको थियो । हामी सानै थियौ र...